USolwazi Dennis Pudifin.
Abasebenzi, abafundi, abangani kanye nabaphathi baseSikoleni seClinical Medicine (SCM) e-UKZN nesibhedlela iKing Edward VIII bahlanganyele ukuvalelisa kuSolwazi Dennis Pudifin othathe umhlala phansi eneminyaka eyi-79 kulonyaka.
USolwazi weMithi yokwelapha uqhubekile nokusebenza wadlula isikhathi sakhe sokuthatha umhlala phansi ngo1999 ngoba uthe iclinical immunology imunikeze iminyaka eminingi ejabulisayo yokufunda.
Lodokotela ohamba phambili bakuqgajisile ukuzinikela kwakhe kumukhakha wemithi yokwelapha nokwazi ukuthi abantu baguliswa yini.
Isidlo sasemini besibanjwe egameni lakhe esikhungweni seSikole sezeMpilo lakuphakamiswe umlando wakhe “njengoMfundisi nengcithabuchopho evelele” oshiye lomukhakha uqguqguzelekile.
UPudifin ubeyilungu leBritish Society for Immunology, iSouth African Immunology Society lapho ebephethe khona kusukela ngo1987 kuya ku1988, iSouth African Rheumatism and Arthritis Association, iSouth African Society for Haematology kanye neSouth African Medical Association.
Ubuye waba iFellow weSouth African College of Physicians ngo1961, ilungu leRoyal College of Physicians ngo1970 e-United Kingdom kanye neFellow yaseLondon Royal College of Physicians ngo1979.
UPudifin kuphinde kwaqhakambiswa umsebenzi wakhe e-UKZN kubalwa kakhulu ukufundisa, ukuhlola nokusiza abenza amazing aphansi napezulu.
Ubewusihlalo weNational Regional AIDS Committee, iKing Edward VIII Hospital’s Infection Control Committee, i-UKZN’s Library Committee neDurban’s City Orchestra.
Ubebuye abenobudlelwano obukhulu neNational AIDS Advisory Group neFaculty of Medicine Board and Ethics Committees e-UKZN yakudala.
UPudifin umenye ukube athule ucwaningo lwakho nge-immunology negciwane lesandulela ngculazi nengculazi ezindaweni ezahlukene ezizimele, amaqembu obudokotela, izinkampani, izikole, iSABC neSATV.
UDkt Kennedy Nyamande, Ongumphathi wesikhashana sesiKole seInternal Medicine; uDkt Olaf Baloyi onguMphathi yezeMpilo esibhedlela iKing Edward VIII noDkt Fraser Pirie, iPrincipal Specialist ku-Endocrinology and Metabolism, bahalisele uPudifin ekuthatheni kwakhe umhlala phansi.
Bathe ulibekile izinga lokuthi udokotela kumele abe njani futhi aziphathe kanjani.
Bamuchaze njengomuntu ozinikelayo, owenzisisayo nomuntu osebenze kakhulu kunabanye e-UKZN nasesibhedlela iKing Edward VIII.
‘Uyena obeqala izinto,’ kusho uBaloyi, ‘futhi ekundiziseni kwakhe phezulu ifulegi kodwa ubekwazi ukukwenza uzizwe engathi niyalingana.’
UMongameli wesigungu sabafundi bezobudokotela iMSRC, uMnu Nsizwenye Mkhwanazi, uthe uPudifin obeyilo mfundisi obethandwa kakhulu abafundi. ‘Lochwepheshe ubehlale ezigqokele ijazi lakhe elimhlophe nabafundi bebekuthanda ukuvula izincwadi ezibhalwe nguye uma besemtapeni wolwazi. Ngiyethemba uma sonke emikhakheni yethu eyahlukene singakulangazelela ukufana njengoSolwazi Pudifin kunethemba lemiphakathi engcono,’ kusho uMkhwanazi.